DEG DEG: Ronaldo oo doonaya in uu ku laabto Juventus - Iftiin FM
DEG DEG: Ronaldo oo doonaya in uu ku laabto Juventus
Xiddiga Manchester United ee Cristiano Ronaldo ayaa laga yaabaa in loo soo bandhigo fursad uu ugu laaban karo Juventus ka dib markii wakiilkiisa Jorge Mendes la sheegay inuu u soo bandhigay xiddiga reer Portugal ku laabashada kooxda reer Italy.
Weeraryahankii hore ee Real Madrid ayaa kaliya ka tagay garoonka Juventus Stadium xagaagii hore isagoo ku soo laabtay Old Trafford, Inkasta oo uu soo qaatay xilli ciyaareed guulaystay shaqsi ahaan kadib markii uu Ronaldo dhaliyay 24 gool xilli ciyaareedkii dhamaaday.
Kulanka: Chelsea Vs Zenit.
Man United ayaa kaalinta 6-aad kaga dhamaystay premie League xilli Red Devils soo qaadatay xilli ciyaareedkii ugu xumaa taariikhda kooxda dhinaca dhibaha.
Dhanka kale xiddiga Ronaldo ayaa ka wal-walsan dhaq-dhaqaaqa suuqa kala iibsiga kooxda Man United taas oo keeni karta in uu isaga tago kooxda hadii ay samayn waydo saxiixyo ay ku horumariso kooxda.
Daafacyada ugu fican horyaalka EPL.
Sida laga soo xigtay Sport, Wakiilka Ronaldo ee Mendes ayaa Juventus u gudbiyay dalab ku saabsan xiddiga 37 jirka ah iyo ku laabashadiisa Turin.
Isla wargayska ayaa sheegaya in ayna Juventus gabi ahaan meesha ka saarin suurtagalnimada ah soo laabashada xiddiga inkasta oo uu shaki ka jiro dhamaystirka heshiiska.
Xiddiga Cristiano Ronaldo oo ka tagaya Kooxdiisa .
Wararka ayaa intaas raacinaya in uu Ronaldo diyaar u yahay in uu hoos u dhigo mushaharkiisa si uu ugu biiro kooxda Juventus isaga oo noqon kara xiddigii 2-aad ee Man United ee Juventus ku biira xagaaga kadib Paul Pogba oo qarka u saaran ku biirista Juventus.
Mohamed Salah oo farin u diray Sadio Mane
Booliska Kenya oo raadinaya nin looga shakiyay in uu ka tirsan yahay argagixisada
Xiddigaka tirsan kooxda PSG oo doortay shaxdiisa ugu fiican ee 5-ta xiddig ah
Hakim Ziyech oo ku biiraya Kooxda AC Milan
Milkiilaha kooxda chelsea ee Todd Boehly oo la kulmay Wakiilka Cristiano Ronaldo Jorge Mendes